ဟင်နရီအိုနီးကူရူသည်မိုနာကိုရှိအသင်းမှထွက်လာသည်။ သူသည်ဇန်နဝါရီလတွင်ပြင်သစ်ကလပ်မှထွက်ခွာခြင်းကိုအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ရုရှားထံမှကမ်းလှမ်းချက်များကိုပယ်ချခဲ့သည့်ကြယ်ပွင့်လူငယ်သည် Galatasaray ရှပ်အင်္ကျီကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ဝတ်ဆင်ရန်နေ့ရက်များကိုရေတွက်နေသည်။ Galatasaray သည်သူရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကို ၁.၅ ရာသီငှားရမ်းလိုသောနိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးကစားသမားအားအစ္စတန်ဘူလ်သို့ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
Onyekuru ၏တစ်ခုတည်းသောဆန္ဒမှာ Galatasaray ဂျာစီကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်သူသည်အကောင်းဆုံးအချိန်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်မိုနာကိုသည်ယခုရာသီအစည်းအဝေးကိုစိတ်အားထက်သန်နေပြီး၎င်းသည်ရာသီအစတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောပconflictိပက္ခနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။
ဂလာတာဆာရီသည်စာချုပ်ကို ၁.၅ ရာသီအတွက်သဘောတူသည်။ D’Avila သည်နောက်ဆုံးရက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီကြီးကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုများရှိကြောင်းသိရှိရပြီး Galatasaray အုပ်ချုပ်ရေးသည်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်လွှဲပြောင်းမှုသည်သေချာသည်ဟုယူဆခဲ့သည်။
SULTANBET577 GALATASARAY’DA ONYEKURU İÇİN GERİ SAYIM! RESTBET501 BALOTELLİ BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI BETPAS423 BALOTELLİ BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI SUPERBAHİS786 BALOTELLİ BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI BETBABA138 BALOTELLİ BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI RESTBET501 BALOTELLİ BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI SUPERBAHİS483 FENERBAHÇE’DE GÖKHAN GÖNÜL ŞOKU! SUPERBAHİS483 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ SUPERBAHİS483 EMRE BELÖZOĞLU’NDAN KORONAVİRÜS İTİRAFI SUPERBAHİS483 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ
8 Comments on SUPERBAHİS483 GALATASARAY’DA ONYEKURU İÇİN GERİ SAYIM!
EMRE December 5, 2020 at 2:00 pm
OSMAN ERSEGUN December 8, 2020 at 2:00 am
ÖZLEM December 8, 2020 at 4:40 pm
EYÜP December 14, 2020 at 6:50 pm
KANDEMİR December 15, 2020 at 1:30 am
BURAK December 16, 2020 at 1:20 pm
ERTUNGA December 17, 2020 at 10:10 am
MİNE December 18, 2020 at 10:30 pm